တစ်ဦးတည်းသောချစ်သူလေးရဲ့လက်ကိုတွဲကာ ပရိတ်သတ်တွေရှိတဲ့လူပုံအလည်ကိုတရားဝင်ပွဲထုတ်ပြလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် – Cele Seven
သရုပ်ဆောင်သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ရုပ်ရည်ရူပကာကလည်း ပြောစရာမလိုအောင် လှပသူတစ်ယောက်ပါ။ . . . . . . . သင်ဇာဝင့်ကျော်က ပုရိသပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားကျခြင်းခံရသူဖြစ်ပြီး အနုပညာအောင်မြင်မှု၊ မိသားစု ဘဝပြည့်စုံမှုတို့မှာလည်း ပြီးပြည့်စုံသူတစ်ယောက်ပါ။
သူမက အမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူဖြစ်ပြီး ချစ်သူကောင်လေးကိုလည်း အရမ်းချစ်တဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးကို တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးတဲ့ အရာလေးကို လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူသိရှင်ကြား ပွဲအခမ်းအနားကို အတူတူ တတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီး ပွဲတတ်နေတဲ့ ပုံလေးကို သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ တကွတင်ပေး လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲမှာ ဆိုရင် မမသင်ဇာနဲ့ သူမရဲ့ ကောင်လေးတို့က အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး လိုက်ဖက် လွန်းနေတာကို အထင်အရှား တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ မနဲ့မောင် စုံတွဲလေးဖြစ်တဲ့ မမသင်ဇာတို့ရဲ့ စုံတွဲပွဲတတ်ပုံလေးတွေကို ပရိသတ်ကြီး အတွက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
CreditးMyanmar Load
သရုပျဆောငျသငျဇာဝငျ့ကြျောကတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး ရုပျရညျရူပကာကလညျး ပွောစရာမလိုအောငျ လှပသူတဈယောကျပါ။ . . . . . . . သငျဇာဝငျ့ကြျောက ပုရိသပရိသတျတှကွေားမှာ နာမညျကွီးသူတဈယောကျဖွဈပွီး မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အားကခြွငျးခံရသူဖွဈပွီး အနုပညာအောငျမွငျမှု၊ မိသားစု ဘဝပွညျ့စုံမှုတို့မှာလညျး ပွီးပွညျ့စုံသူတဈယောကျပါ။
သူမက အမွဲတမျးပြျောပြျောနတေတျတဲ့ သူဖွဈပွီး ခဈြသူကောငျလေးကိုလညျး အရမျးခဈြတဲ့ သူဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောက သူမရဲ့ ခဈြသူကောငျလေးကို တဈခါမှ မလုပျဖူးတဲ့ အရာလေးကို လုပျလိုကျပါတယျ။ အဲဒါကတော့ လူသိရှငျကွား ပှဲအခမျးအနားကို အတူတူ တတျလာတာ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြသူကောငျလေးနဲ့ ပြျောပြျောကွီး ပှဲတတျနတေဲ့ ပုံလေးကို သရုပျဆောငျ သငျဇာဝငျ့ကြျောက သူမရဲ့ လူမှု ကှနျရကျ စာမကျြနှာပျေါမှာ ဓာတျပုံလေးတှနေဲ့ တကှတငျပေး လာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဓာတျပုံလေးတှထေဲမှာ ဆိုရငျ မမသငျဇာနဲ့ သူမရဲ့ ကောငျလေးတို့က အရမျးကို ခဈြဖို့ကောငျးပွီး လိုကျဖကျ လှနျးနတောကို အထငျအရှား တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ မနဲ့မောငျ စုံတှဲလေးဖွဈတဲ့ မမသငျဇာတို့ရဲ့ စုံတှဲပှဲတတျပုံလေးတှကေို ပရိသတျကွီး အတှကျဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
မိခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက် ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သရက်ကင်သည်မလေးမိသားစုအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ စည်သူပလတ်ကျွတ်ရဲ့ဗီဒီယို